तपाईंलाई थाहा छ, प्रेमले सबै विपत्तिलाई सामना गर्न र सबै बाधाहरू हटाउन सक्छ। समेत अलगाव र मायालु सेवकहरू ईमानदार र बलियो भावनाहरूको बाधा छैन। निस्सन्देह, तपाइँलाई मनपर्ने व्यक्तिसँग विभाजित, केही दिनसम्म पनि, अनन्त जस्तो लाग्न सक्छ। तथापि, यो सम्झना लायक छ कि हाम्रा आमा र दाजुभाइहरू जस्तै थिए, जसले अध्ययन र कामका ठाउँहरूबाट बारम्बार र लामो यात्राबाट, युद्धबाट आफ्ना पति र प्रियजनहरूका लागि पर्खाइरहेको थियो। विशेष गरी ती दिनहरूमा फोन, लामो एसएमएस सन्देशहरू हरेक घण्टामा लामो वार्तालापको लागि कुनै सम्भावना थिएन, र कसैले भिडियो सञ्चारको बारेमा कसैलाई सुनेनन्। अनि त्यसोभए प्रेमको आगोले अलगाव, सुन्दर र आशाहरु र अपेक्षाहरु बाट पत्रहरुमा पत्रहरु द्वारा समर्थित भएको थियो।
अलगावमा मायालु एकलाई एक पत्रले लामो प्रतीक्षा र केटीहरूको अकेलापनलाई उज्ज्वल पार्न सक्छ। अलैंचीमा मायालु सुन्दर अक्षर रचना गर्न, उहाँले एक घण्टा छोडेनन्, तर पेपरमा सबै ईमानदार भावनाहरू - प्रेम र जुनून, आशा र आशा, योजनाहरू र सपनाहरू निस्कियो। उनको पतिलाई अलगावमा एक पत्रले भविष्यको लागि न केवल योजनाहरू समावेश गर्न सक्छ, तर दैनिक जीवन, घटनाहरू र परिस्थितिहरूको लामो विवरण, पत्नी र बच्चाहरूको सफलता, र अन्य रोचक चीजहरू पनि समावेश हुन सक्छ। र सबैभन्दा प्रसिद्ध कविताका कविताहरूमा अक्षरहरू आफ्ना प्रियजनहरू र तिनीहरूको जवाफहरूमा के हुन्। सम्पूर्ण पत्राचार पहिले नै शास्त्रीय साहित्यको एउटा उदाहरण बनिरहेको छ, किनकि प्राचीन समयका महान दूरीहरूले सधैंभरि मानिसहरूलाई बिच्छेदन गर्न सक्दछ।
प्रेम र विभाजनका पत्रहरू
आधुनिक संसारमा, मेलद्वारा पठाएको लिफाफेहरूमा कागज पत्रहरू सफलतापूर्वक इलेक्ट्रोनिक बक्स, सामाजिक सञ्जाल, च्याटहरू, एसएमएस सन्देशहरू मार्फत च्याट गर्दै छन्। तथापि, यसबाट लिखित अक्षरहरूको कला बिग्रिएको छैन। यो उनीहरूको डिलिवरीको मात्र अधिक सुविधाजनक हुन्थ्यो। यसबाहेक, वास्तविक समयमा दूरीमा एक व्यक्ति संग संचार कहिल्यै अलगावमा मायालु एक, सबै रोमाञ्चक र भावनाहरु को एक पत्र को प्रतिस्थापन गर्न सक्षम हुनेछैन।
यदि तपाईंलाई एक प्रेमबाट अलग रहनु पर्छ भने, यो तपाईंको प्रिय मानिसलाई एक अलगावमा पत्र लेख्न लायक छ, यो तपाईंको भावनालाई प्रमाणित गर्न उत्तम तरीका हुनेछ। अलगावमा मायालु एकलाई एउटा पत्रमा धेरै छुटेको सम्झनाहरू समावेश हुन सक्दछ, जुन केवल तपाइँ र उहाँलाई थाहा छ। यसको अतिरिक्त, तपाईं आफ्नो सबै भावनाहरु शब्दहरु संग व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ, र उनीहरूको पुर्खाले जस्तै, एक कविता को रूप मा उनको पनि कपडे।
अलगाव मा मान्छे को एक पत्र - के गर्न को लागी?
एक व्यक्ति को जुदाई मा एक पत्र एक आसान कुरा होइन, एक गंभीर दृष्टिकोण को आवश्यकता हो। तपाईंले शब्दहरूमा सबै कुरा व्यक्त गर्न कठिन छ, तर तपाइँ यसलाई गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। अलगावको सुन्दर अक्षरहरू हुनु पर्दछ, तथापि, तपाइँ केवल एक प्रिय बिना कसरी खराब छ भन्ने बारे उजुरी समावेश गर्दछ। यो राम्रो छ भने तपाईले लेख्नुहुन्छ, तपाईं कसरी बैठकको प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ, र के तपाइँ भेट्नुहुन्छ जब तपाईं के गर्नुहुन्छ। भविष्यको लागि तपाईंको योजनाहरू, तपाईंका लक्ष्यहरू, सपनाहरू र इच्छाहरूको वर्णन गर्नुहोस्, जसलाई तपाईं एक साथ साम्राज्य प्रदान गर्नुहुन्छ। यो मायालु र कामुकता को एक नोट पत्र को केहि नोट जोडने को लागि यो अति उत्तम हुनेछ। यो तपाईंको पुरुषहरु को लागि सच्चा रहन र एक साथ बिताएका सबै भन्दा राम्रो मिनेट सम्झना को लागि एक अतिरिक्त प्रोत्साहन हुनेछ, र अपमानिता संग भेट को लागि तत्पर छ।
महत्त्वपूर्ण छ कि पत्रमा तपाईंको व्यक्तिले सबै ईमानदारी महसुस गर्यो तपाईंको शब्दहरू भावना र प्रेमको बारेमा। दोहोरो दोहोरो दोहोर्याउनुहोस्। यो राम्रो तरिकाले सबै चीजहरू लेख्नु राम्रो छ जुन तपाईं आँखामा भन्नुहुनेछ। यो अत्यन्त सरल र बिना भ्रामक शब्दहरू बन्न दिनुहोस्, तर यो शुद्ध हृदयबाट आउनेछ। यसबाहेक, धेरै पुरुषहरू, स्त्रीहरू भन्दा कम, अनुभव र धोखाधडी र ईर्ष्यासँग आफूलाई उत्पीडनबाट डराउँछन्। पत्रमा तपाईंको शब्दहरू प्रियलाई आश्वस्त पार्नु हो कि तपाई उहाँप्रति वफादार हुनुहुन्छ, उहाँ तपाईंको वफादारीको बारेमा विश्वस्त हुनुपर्छ र विश्वस्त हुनुपर्छ।
तपाईले एउटा पत्र पठाउन सक्नुहुनेछ ई-मेल, एसएमएस, सोशल नेटवर्कमा। तर मायालु एकलाई एक पत्र लेख्न उत्तम तरिका यो हातमा लेख्न हो। तपाईंको हस्तलेखन, तपाईंको हात कांप, आँसुमा आँसु पुछिने आँसुहरू, सबै चीजहरू छन्, जस्तै कि रोमान्स र प्वाँखको स्याहीको पुरानो पुराना दिनहरूमा। र यो यी पत्रहरू हो जसले पुरुषहरूलाई डोऱ्याउँछ। त्यसैले महिलाहरू लेख्नुहोस् र तपाईंको भावनाहरूको शंका नगर्नुहोस्!
पहिले मान्छेलाई कसरी फर्काउनु हुन्छ?
गर्भवती समयमा अंगूर - तेस्रो ट्रिमर
गाढा कपालमा खैरो कपाल कपाल पार्नु हुन्छ?
ओ.ए. 125 को ओभररर्कर
व्यापार कार्डहरूको लागि खडा हुनुहोस्
घर मा आफ्नो खुट्टा कसरी पम्प गर्ने?
अर्नोल्ड श्वार्जनेगरले "ओलम्पिक ओलम्पिया" को अवैध पुत्रबाट बाहिर निकाल्न चाहन्छ
तपाईंको पेट कस्तो छ भने तपाईलाई कसरी थाहा छ?
व्यक्तिगत खानाको सेवन
शर्मा - नुस्खा
चाय को पंखिहरु देखि जाम कसरि तैयार छ?
बुरी आँखा र खराबबाट बिहीबारको नमक
प्रिन्स हैरी आफ्नो लागि Norfolk मा एक हवेली किनछ
घरमा राम्रो तरिकाले नमकीन सामन
पेट स्लिमिङको लागि पोषण
आयरिश फीता - मास्टर क्लास